Waxaan horay uqiyaastay saamaynta ganacsi ee adeegga macaamiisha oo liita marka loo eego warbaahinta bulshada. Ka waran si fudud oo looga jawaabo? Ma ogtahay in 7 ka mid ah 8 farriimood ee bulsheed ee loogu talagalay noocyada aan laga jawaabin 72 saacadood gudahood? Isku soo wada duuboo iyadoo ay jirto xaqiiqda ayaa ah in 21% ay kordheen farriimaha loo dirayo noocyada adduunka (18% Mareykanka) waxaanna dhibaato dhab ah ku qabnaa gacmaheena.
Taladayda dheeriga ah waxay noqon doontaa in la hubiyo in qof kasta oo ka jawaabaya arrimaha bulshada la siiyay awood si loo hubiyo in arrimaha si dhakhso ah oo guul leh lagu xalliyo. Khatar ugama dhigi kartid dib udhaca jawaabta fagaaraha dadweynaha oo leh nidaam ubaahan in tikidhada dib loo qoondeeyo loona gudbiyo sixitaanka.